Cajón de Sastre, ọtụtụ, ọtụtụ na-akpali mmasị ịmata - Ikkaro
Ihe omuma ndi ozo na amaghi ihe m gha agha, ma obu n'ihi na ha adighi isi okwu ma obu n'ihi na ezughi oke ọdịnaya rue ugbua imeputa nke m.
Ngwakọta a gwakọtara na B NOTGH disaster ọdachi blog. Ọtụtụ isiokwu ndị na-apụ apụ na-ada na mpụga isi edemede blog. N'ebe a, anyị ga-ahụ ọtụtụ ihe niile gbasara N'onwe Gị, na ihe ndị e mepụtara.
Sayensị, akụkọ, ịmata ihe, akụkọ banyere ihe ndị na-agaghị ekwe omume. Anyị ka na-ekwu maka igwe kwụ otu ebe, wiilị na igwe Goldberg, akwụkwọ akụkọ, mkpụmkpụ, mmemme NASA ị ga-ahụ n'anya n'ezie.
Ebumnuche bụ ịhazi drawer a n'oge ma chịkọta ya n'ime isiokwu. Ma ị maara ...
Amalitere m ide “ọzọ” na ọwa Youtube. N'ime afọ ndị a, ahapụrụla m vidiyo iri na abụọ gbasara ihe dị iche iche, mana amalitere m ibipụta ya mgbe niile.
Vidio atọ ikpeazụ m dekọtara kwekọrọ na nke m bipụtara na blog, mana ọ gaghị adị ka nke ahụ mgbe niile. Echiche nke ọwa YouTube bụ imeju ozi ahụ na blog ma ọ bụrụ na m ga-aga nke ọma, ọ nwere ike ịnwe ndụ nke ya. Achọrọ m ibipụta ihe ụfọdụ na-adọrọ mmasị mana nke dịkwa oke nfe ịnwe ọkwa nke m ma ọ bụ nke usoro vidiyo dị mma karịa nke edere.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịdenye aha ị nwere ike pịa ebe a anyị fọrọ nke nta ka 300 :)
Vidio ndị kachasị ọhụrụ maka gị ka ị hụ ma ị nwere mmasị ịdenye aha:
Ugbu a ee. Ọ bụ nnukwu mmụba dị na Ikkaro n’ime afọ iri na abụọ. Ma lee, emeela m ihe dị na weebụ na weebụ. Mgbe m chesịrị echiche ike, ekpebiela m ime ka Ikkaro bụrụ ebe nrụọrụ weebụ nkeonwe. Ruo ugbu a ihe niile m bipụtara gafere nzacha. Ihe niile nwere njikọ chiri anya. Ugbu a, ihe ụfọdụ ga - apụta nke nwere ike ịhapụ ụzọ ha na - emebu. Mana amaara m na dịka ihe dị mkpa dị ka isiokwu ahọpụtara bụ ịbịaru nso, ụzọ e si eweta ya na nkwekọ na ntanetị ndị ọzọ.
Achọrọ m ka web ahụ ghara ịbụ njedebe kama were ya dịka ụzọ, dị ka ngwa ọrụ. Achọrọ m ịkwụsị biputere dị nnọọ okokụre ihe na-amalite iji ya kpokọta ozi na ihe na-eme. Nke echiche na-ebilite, ule na-ada.
Gini mere na m agaghi akuko ihe omuma ma obu okwu m nwere nke onye obula ma oburu na m weputara ihe ndi di uto? Site na mgbe m na-eme Ikkaro m naanị onye nrụọrụ weebụ, dum onodu mgbanwe. M ga-emeri na fun.
Na njedebe, anyị bụ ihe niile anyị na-eme, ihe ọ bụla na-eme anyị ma na-amasị anyị ma ọ dị mma igosipụta ya ebe a. Enweela m njikọ ụfọdụ weebụsaịtị na isiokwu ndị m chụsasịrị na ndị etinyelarị na Ikkaro.
Onyinye pụrụ iche sitere n’aka ndị eze
M na-agakarị onyinye ndị eze na blog, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọdịnala. Ọ dabara na ha na-ahapụrụ m ihe masịrị m, na-enweghị ịrịọ maka ha na nke ahụ na-eweta ịrị elu ikwu okwu na blọọgụ. Ugbu a ụmụ nwanyị abụọ dị afọ 3 na 5 na mgbakwunye na onyinye m, nke ya na-amalite ịmasị nke ukwuu.
N'afọ a m kpebiri na m gaghị ebipụta ntinye ahụ, wee ju m anya n'ihi na echere m na ọ bụghị ihe na-atọ ụtọ, ọtụtụ ndị jụrụ m banyere ya. Ihe edemede a gbasara ha, gbasara ndị a gbara m ume site na nkọwa na ozi ịntanetị ha. Ọ dị m nwute maka igbu oge na mbipụta ahụ, mana n'ihi nsogbu onwe onye dị iche na ọ gaghị adị na mbụ.
Ka anyị na a gburugburu nke kasị akpali.
Kalenda Dodecahedron maka 2018
Ọ bụrụ na ị na-achọ a kalenda maka oche gị maka 2018, mara mma ma nke ahụ dị ọnụ ala ma dịkwa mfe iji wuo ọ dịghị ihe dị ka ndebiri ndebiri a iji mee dodecahedrons. Dị ka ị nwere ike icheworị, enwere ihu 12 nke polygon oge niile, otu maka ọnwa ọ bụla :) N'oge ya anyị kwuru maka ya kalenda rue mgbe ebighi ebi, nke bụ nhọrọ ọzọ dị mma iji mepụta nke ọma na osisi, akwụkwọ ma ọ bụ kaadiboodu.
Ejiri ihe ndị a na-edebere ndebiri nke mgbakọ dị iche iche ntaneti, dị kensinammuo ma dị mfe iji. Ọ bụ ihe gbasara a dodecahedron kalenda jenerato.
Ọ dị ezigbo mfe. Choose na-ahọrọ n'etiti ụdị abụọ dodecahedra nke ọ na-enye, afọ nke kalenda, asụsụ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka izu izu ga-apụta ma ọ bụ na ọ bụghị na usoro ọ na-ewepụta, nke nwere ike ịbụ PDF ma ọ bụ postcript ma budata.
My 85 ″ LCD Edere Mbadamba ụrọ LZS8,5 (Boggie Board)
Nke a bụ akụkọ banyere n'amaghi ama, emesiri m LCD Tablet Tablet. Anọ m na-eme nchọgharị, dịka ụbọchị ọ bụla ma hụ onyinye na Gearbest maka ihe m chere bụ mbadamba ihe osise dijitalụ, anyị dị ka Wacom mana na om 8. Ero asatọ !!! Dị ka ọ dị njọ, ọ bara uru ịme ihe 4 nke m na-ebu n'uche mgbe ụfọdụ. N'ihi ya azụrụ m ya.
Ihe ịtụnanya na-abịa mgbe m natara ya wee hụ na ọ dị oke mma na ọ nweghị ihe ọ bụla jikọọ ya na ebe ọ bụla, ma ọ bụ bufee ya ma ọ bụ ihe ọ bụla ma ọlị. N'ihi ya, m laghachiri faịlụ ahụ ee ... M nwere LCD Writing Tablet, nke na-agba ọsọ echere m na aha ahụ duhiere m. Callfọdụ na-akpọ ya Boggie Board, ọ bụ ezie na nke a bụ akara nke na-anọchite anya ngwaahịa ahụ.
Nchọgharị m maka Knolling na-amalite n’amaghị ama ya site na onyonyo Todd MacLellan na akwụkwọ ya Ihe Na-adịghị Eke: Akwụkwọ Ntanetị maka Live Live Ihe onyonyo ndị ahụ gbawara mere ka m nwee ịhụnanya, na-achọ ihe ọmụma gbasara onye edemede m matara Knolling dị ka usoro nke nhazi, kamakwa dị ka ụdị nkà, iji mepụta ịma mma site na ihe ndị dị kwa ụbọchị.
Mgbe ọtụtụ afọ nke ịtọsasị ihe na ịhapụ iberibe ihe ọ bụla iji mee ka uche gị nwere onwe ya, ọ nwere ike ịbụ ụzọ na-adọrọ mmasị ma mara mma iji wee gbasasịa. O meela ka m kwenye.
Gịnị bụ Kippel
Na-akwadebe a ederede na kaleidocycles Abiala m na echiche nke Kippel ma enweghị m ike iguzogide ịkọrọ gị ya ebe ọ bụ okwu ọ bụla Onye kere ya chọrọ.
Kippel pụtara na akwụkwọ akụkọ site n’aka Philip K. Dick Ndi Androids Nrọ nke Atụrụ Eletriki? N'ezie mara nke ọma dị ka agụba ọsọThgha, akụkọ akụkọ sayensị na ihe nkiri m gụrụ ọtụtụ afọ na afọ gara aga. N'ebe a, Kipple na-akọwa:
BioCoder, akwụkwọ akụkọ gbasara DIY Bio
M soro ya kemgbe amụrụ ya na 2013 ọ bụ ezie na ugbu a enwere m ọtụtụ ọnụọgụ na-echere ịgụ, mana m amalitela ịchụkwudo ;-)
Magazin ahụ BioCoder, bụ akwụkwọ mgbasa ozi n'efu sitere na O'Really raara onwe ya nye DIY Bio. A na-enye ya na nkeji iri na ise na edemede na DIYBio, DIY mana etinyere ya na bayoloji, bayoloji sịntetik, mkpụrụ ndụ ihe nketa, wdg.
Gịnị mere m ji kwado ya? N'ihi na a zuru okè ụzọ ịme ka ị na ụwa nke Bio Mee N'onwe Gị, ma karịa ihe niile n'ihi na-eme ka anyị mata ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọrụ ọhụụ na ngwa akụrụngwa Open nke ahụ ga - eme ka anyị mata ụdị na mkpa nke Mee N'onwe Gị na - enweta
Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe ya na ọ dị mgbagwoju anya, wetuo obi. Ọ bụghị teknụzụ ma ọ nwere ike ịgbaso ule niile ọbụlagodi na ibidobeghị n'ụwa a, ee, ọ dị n'asụsụ Bekee.
PCL ma ọ bụ polycaprolactone
Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ị nụrụ aha a, ị nọ n'udo n'ihi na taa ị ga-eju anya. PCL bụ plastik nke na-ekpo ọkụ nke anyị nwere ike iji aka anyị akpụ mgbe ị na-ekpo ya gburugburu 60ºC na nke ahụ gbasiri ike na oyi ma anyị nwere ike ịmeghachi usoro ahụ ugboro ugboro, ọtụtụ narị ugboro.
Ka ọ na-ajụ oyi, ọ na-esi ike ma sie ike, anaghị eme ọkụ eletrik ma ọ bụ okpomọkụ, na-anaghị egbu egbu ma na-emebi emebi. O yiri ka azịza zuru oke maka ihe anyị mepụtara abụghị ya?
Nye m na-echetara m Sugru, ma inwe ike iji ya mee ihe ọzọ, ọ dịkwa ka ọ̀ na-esiri ya ike ịgbanwe. Ọ bụ ezie na enwere ike ịmegharị ya ugboro ugboro bụ ihe dị ezigbo mkpa.
Hụ otu ime anwansi si eme….
Ngụkọta oge iji wuo kartem n'ụlọ site na nkụkọ eletrik
Oge ụfọdụ gara aga ahụrụ m vidiyo na Youtube, ebe ha wuru a Kate arụrụ n'ụlọ maka ụmụaka eji dị ka moto na-enweghị eriri igwe.
Igwe na nhazi dị mfe, anyị ga-ahụ ya ma emechaa, ị ga-elerịrị vidiyo ahụ egwu ya, mana Kedu ihe m ga-eji? Ha niile kwesiri ya ma ọ bụ na ọ ghaghị inwe opekempe nke ike?
Tupu ịmalite ịzụta ihe ma mee ka kart dị ka onye nzuzu, anyị ga-eme ụfọdụ nchịkọta dị mfe iji dokwuo anya ụdị ụdị egwu mmiri ga-eguzogide ọnọdụ ndị anyị ga-edobe ya. jiri ya dị ka moto ụgbọ ala eletrik.